Sida loo Hagaajiyo Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Macluumaadkaaga Fashilmay | Martech Zone
Waxaan weydiinay su'aasha dhowaan - waxaanan bixinay qeexitaan ku saabsan - inaad tahay iyo inkale Istaraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabaha ku saabsan waxay ku saabsaneyd wax soo saar, joogitaan, ama hey'ad dhisme. Dhibaatada aan wali sii wadno inaan aragno ayaa ah shirkadaha kaliya diirada saaraya daadinta waxyaabaha iyaga oo aan falanqeyn iyo hagaajinta natiijooyinka.
Qeexitaanka waallidu miyaanay samaynayn wax isku mid ah oo soo noqnoqonaya laakiin aan rajaynaynno natiijooyin kala duwan? Haddii taasi qeexayso istiraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabahaaga, waxaad ku jirtaa dhibaato runtiina waxaad u baahan tahay inaad joojiso waqtiga iyo ilaha aad ku daadineyso musqusha. Adiga waxaa laga yaabaa hel natiijooyinka qaar, laakiin fursadda aad adigu ugu kaxeyn karto wax badan oo ah soo noqoshada maalgashiga waxay u baahan tahay xoogaa falanqeyn iyo dadaal dheeri ah.
Infograafigani ka yimid BrightEdge, ah Barxadda SEO, wuxuu diiradda saarayaa sida istiraatiijiyad suuqgeyn wax ku ool ah oo suuq geyn ah oo ay weheliso dadaallada bulsheed iyo dhiirrigelintu ay u noqon karaan kordhi qiimeyntaada guud.
Suuqgeynta maaddada waxay la shaqeysaa xeelado SEO ah oo xariif ah si loo dhiso hey'ad loona kordhiyo ka warqabka sumaddaada. Mawduuc wanaagsan ayaa dhisi doona ururo wanaagsan oo leh astaantaada. Inbadan oo ka mid ah waxyaabahaan tayada leh ayaa kaa caawin doona inaad ka dhigto shirkaddaada mid sareysa natiijooyinka raadinta awoodeeda sare. Sudhir Sharma
Istaraatiijiyad suuq-geyn ah oo isku-dhaf ah oo suuq-geyn ah, rajooyinka ayaa inta badan ka beddela mid dhexdhexaad ah una gudba mid kale. Tusaale ahaan, waxyaabaha aad ku wadaagto baraha bulshada waxay gaari karaan qof markaa baaraya magacaaga, sheygaaga ama adeeggaaga. Taasi waxay ku degaysaa bartaada kadibna waxay iska diiwaangelinayaan joornaalkaaga email. Bilo ka dib, waxay ku akhriyeen maqaal email ahaan waxayna go'aansadeen inay beddelaan. Istaraatiijiyad isku dheelitiran oo aad ku falanqeyneyso mawduucyadaada, aad u qorsheyneyso waxyaabaha aad ka kooban tahay, oo aad cabirto jawaabta ayaa kaxeyn doonta maamulka nuxurka.
Tags: dhalaalayamaamulka nuxurkanatiijooyinka suuqgeynta waxyaabahaxeeladaha suuq gaynta waxyaabahadhiirrigelinta waxyaabahahorumarintaraadinta moodada raadintaSEOkobcinta bulshada